Tsara ve ny kiraro bisikileta Lake? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Famerenana kiraro amin'ny bisikileta Lake - ahoana no hamahanao
Famerenana kiraro amin'ny bisikileta Lake - ahoana no hamahanao
Tsara ve ny kiraro bisikileta Lake?
IRETOShoesdia mety amin'ny fametrahana ny watts sy ny cadence. Ny hany fitambaran'izy ireo dia azo ovaina amin'ny fiakarana sy ny fitsangatsanganana, saingy hitanay fa tsara izy ireo amin'ny dia lava sy miadana ary fisaka.
Nanomboka nandeha bisikileta ianao ary liana amin'ny famoronana karazana kiraro bisikileta manokana, saingy tsy azonao antoka hoe inona ny tombotsoan'ny kiraro toa an'ity ary afangaro amin'ny karazana rehetra izahay. Aza manahy, amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny zava-drehetra aho mba hahafahanao manapa-kevitra tsara indrindra amin'izay mifanaraka amin'ny filanao, firy ny fanatanjahan-tena, ny baolina kitra, ny hazakazaka, ny skating ice, ny bisikileta, manana kiraro manokana afaka manatsara ny traikefanao amin'ity fanatanjahantena ity. Ity no kiraroko bisikileta ary ny faritra lehibe izay tsy itovizany amin'ny mpampiofana mahazatra na sneaker, raha Amerikanina ianao dia tena henjana be ny tokana, tsy mihetsika toa ny manandrana izy ary miforitra dia teti-bola tsara miampy izay Ambony amin'ny orinasan-kiraro sy azo antoka ary natao mba hametahana sy hihazona ny tongotrao amin'ny toerany, toy ny kiraro soccer na Sacré boo, raha mila izany fandikan-teny izany ianao azafady? koa ny lavaka ao ambanin'ny kiraro bisikileta ary izany dia toy izany ahafahanao mampifandray ny tadinao izay mifanandrify amin'ny tadin-tongotra izay hapetakao amin'ny kiraro g tsara, ny eritreritra dia manampy anao amin'ny fametahana kalitao kokoa izy ireo ary tsy hiondrika sy manintona gysol ny hena, tsy mandany angovo ianao ary kiraro tsara sy azo antoka dia hanampy anao hirotsaka an-tsokosoko kokoa rehefa manody ary koa rehefa manosika ary ilaina izany amin'ny fampiasana hozatra hafa toy ny tadin-dokotra, ny glute ary ny valahana mora raisina rehefa mitaingina ilay lasely miakatra fiakarana mideza na mihazakazaka aho, handeha bisikileta amin'ny karazan-kiraro isan-karazany aho izao, fa alohan'ny ataoko dia satroka fotsiny aho satria ny voloko mihidy miaraka amiko dia miakatra eo amin'ny tavako foana. ary mahasosotra ahy ihany izany fa ny kiraro dia milatsaka eo amin'ny sokajy roa samy hafa kiraro izay ny tongotra eny an-tsaha ho an'ny kiraro amoron-dàlana, ankehitriny ny tsy fitovizan'ireo kiraro eny an-dalambe ireo dia natao ihany koa ho azo alehanana sy azo aleha.
Izy ireo dia manana rindrina ambony ambony kokoa ambony ambany ary namboarina hampiasa rafitra bol tpleat roa amin'ny sisin-dàlana toa ireny dia tsara kokoa amin'ny fanesorana fotaka noho ny arabe an-dalambe Ireo kiraro an-dalambe dia natao hampiasaina amin'ny pedal arabe fantatro fa toa Kapiteny: Mazava ho azy fa azonao tsara, ary na dia mitondra kiraro eny an-dalambe aza ianao eny an-dàlana, dia mora voahosotry ny loto ireo rafitra pedal ireo. Tsy natao ho an'izany izy ireo, fa manome faritra fifandraisana sy faritra ambonimbony kokoa eo anelanelan'ny kiraro sy ny rafitra pedal ary midika izany fa mahazo lehibe kokoa ianao. Miezaha hanana fanoloran-tena sy fampiononana lehibe kokoa. Ny kiraro an-dàlana matetika maivana kokoa noho ny namany tsy eny an-dàlana, saingy tsy natao ho rahona izy ireo, na dia mandeha an-tongotra vitsivitsy eo amin'ny fijanonana Kafe aza dia tsara, fa arakaraka ny andehananao azy ireo, dia fantaro fa ianao dia ireo pataloha tonta eny ambanin'ny ambany, izay mazàna dia misy lavaka telo eo ambanin'ny kiraro hametahana ny kofehina amin'ny kiraro eny an-dalambe mifanohitra amin'ny roa amin'ny kiraro eny ivelan'ny arabe, eto dia hitanao ny kiraro tsy misy kofehy mifatotra, ny lavaka telo tsy misy ary eto dia misy tokana misy kofehy mifamatotra manamarika ny visy telo telo tsy ananako eto, fa ny volavola kiraro sasany toa ny North Wave dia mampiditra ny rafitra stud na stud na baolina 2-baolina amin'ny faladian'ny ny kiraro mba hahafahanao manao roa Raha mandeha bisikileta an-tsehatra ianao toa ny miditra amin'ny sehatry ny fanatanjahan-tena ohatra ny gran fondos na mety mihazakazaka mihitsy aza, dia ampiasao aho hanome toro-hevitra ny kiraro eny an-dalambe ho fomba iray, fa raha miala ianao- lalana, angamba cyclocross kely na fantatrao fa mety mitaingin-tsoavaly mifangaro fotsiny ianao rehefa mitaingina asfalta amin'ny fotoana hafa ianao, fa avy eo amin'ny sehatra samihafa? toy ny saygravel dia ny kiraro eny ivelany no ho safidiko ary ny zavatra amporisihiko hanamarika zavatra hafa dia ny kiraro eny ivelan'ny lalana dia malaza be amin'ny fivezivezena, indrindra raha toa ka mandeha be ny fivezivezenao amin'ny toerana iray ankoatra ny bisikileta Tsy dia hasiako tsindrimandry loatra izany satria raha raiki-pitia amin'ny fanatanjahantena ianao, izay mora be dia avelao aho hiteny aminao, avy eo mety hahazo ny roa amin'izy ireo fotsiny ianao, hiresaka amin'ny antsipiriany bebe kokoa momba ny hafa aho sokajy kiraro, ny endri-javatra isan-karazany azonao atao, avy eo hazavaiko aminao ny vidiny samihafa, izay azonao antenaina fa bisikileta an-tendrombohitra na mitaingina vatokely no nampiasako koa tamin'ny hazakazaka Riftgravel any Islandy fa ankoatra ny kiraro toy izany dia misy ihany koa kiraro an-dàlana izay namboarina kely toy ny karazana kiraro fitsangantsanganana toa ity izay manana fonontselan-keloka izay tsy maintsy tazonin'izy ireo ny tongotrao dia tsara sy maina ary m ary noforonina tamin'ny fomba hahafahany mandeha ihany koa ao amin'izy ireo.
Izy ireo dia tsara ho an'ny fitsangatsanganana amin'ny ririnina satria mampifangaro tsara ny fandrakofana takelaka fanampiny izay ampidirinao amin'ireo kiraro hafa natsofoka tao anaty kiraro efa misy ary ny bisikileta an-tendrombohitra toa ny namanay ao amin'ny GM-Bien dia matetika toy ny kiraro tokana, izay azonao ampiasaina koa amin'ny pedal fisaka raha mieritreritra ianao fa mety afaka manao triathlons amin'ny ho avy dia kiraro manokana atriathlon no tena fomba tsara handehanana satria amin'ny ankapobeny dia tena tsara tokoa raha hatao kiraro bisikileta mahazatra. Mampalahelo fa tsy manana iray eto aho haneho aminao satria nanandrana nahaliana ny andrana nataoko taloha, fa ireto misy sary vitsivitsy avy amin'ireo namanay sary ao amin'ny GT n fampiasan'izy ireo. Ny tena maha samy hafa ny kiraro manokana atriathlon sy ny kiraro bisikilety dia ny kiraro triathlon no natao hametrahana sy hialana amin'ny bisikileta mba hahafahana mifindra eo anelanelan'ny taranja samihafa haingana araka izay azo atao ny ambany, izay natao Ny rano dia mikoriana rehefa milomano, ahoana ny amin'ny rafitra mifatotra amin'izay, ny kiraro bisikileta dia manana endrika maro isan-karazany manomboka amin'ny Velcro izay mora be nefa mora ampiasaina ary matanjaka be koa izy io Manaraka, manana dialy boa sy plethora an'ny dial hafa ianao, fa ny boa no be mpampiasa indrindra ary tena tsara ireo satria isaky ny manindry ny dial ianao, mamela ny fanitarana milimetatra kely, mifanaraka tsara ny cab rehefa sintomina milimetatra izy, midika izany fa afaka manamboatra sy mamely tsara ianao ny tahotrao anao koa mahazo kiraro amin'ny kiraro ianao.
Ireo dia kinova maivana kokoa an'ny ratchets izay hovidinao amin'ny ski boot raha nanao izany ianao, fantatrao fa nampiasa ski boot ianao, saingy tsy dia fahita firy ireo ankehitriny. Tena mahazatra izy ireo tokony ho dimy taona lasa izay ary ny rafitra fanamafisana malaza amin'ny kiraro manaraka dia ny fehin-kibo toy ireo zerôra ireo. Ankehitriny dia manana tombony ny kiraro kiraro ho tena maivana ary raha ny fahitako azy dia milay izy ireo.
Ity estetika estetika ity dia misy lafy ratsy amin'ny tsy mora fanitsiana azy rehefa mitondra fiara. Zavatra azonao atao amin'ny dialy boa sy Velcro, ary raha manontany tena ianao raha tratran'ny kiraro amin'ny kalesin-tongotrao raha mandeha tsara ianao dia tsy olana amin'ny kiraro bisikilety izany satria mitovy amin'ny kiraro baolina kitra izay itehirizana manokana ny kofehy. mba tsara sy tery ary azo antoka izy ireo rehefa ataonao toy izany izy ireo. Inona no azonao antenaina amin'ny teboka hafa izay atahoranao vola fantatrao ny haavon'ny kiraro isan-karazany fantatrao tsara amin'ny zavatra maro incycling ny vola laninao bebe kokoa, ny henjana sy maivana dia lasa singa ary kiraro dia toy izany.
Ka raha manomboka amin'ny ambaratonga fidirana isika dia afaka mahazo kiraro fidirana mitovy amin'izany amin'ny vidiny telopolo na dimam-polo euro na dolara fotsiny raha mankany amin'ny magazay toa an'i Calphalon ianao ary izay matetika azonao dia kiraro manana Velcro , satria i Velcro no zavatra mora indrindra ho hitanao Velcro amin'ny kiraro avo indrindra koa, satria maivana ihany koa. Eo amin'ny farany ambanin'ny kiraro dia azo atao plastika na fiberglass ny tokana, satria somary mavesatra sy tsy henjana kokoa io, fa tsy lafo noho ny solon'ny fibre carbon, dia mitafy kiraro lafo kokoa ihany koa Mariho fa mampiasa ny roa- koa isika ary telo-visy Manana rafitra cleat izay mahafinaritra, midika izany fa azonao ampifandraisina aminao ny làlana na ny làlana tsy lavitra, ankehitriny raha mandany vola bebe kokoa ianao dia manana kiraro avo lenta ny marika toa an'i Shimano manomboka eo ambanin'ny 100 kilao ka hatramin'ny kiraro antenantenany sokajiko ho 90 na 150 pounds dolara karazana vidin-teboka tena teboka malaza ary mahazo zavatra toy ny myphysique tsara ianao dia tadim-pahefana dimy ananako eto. Ny faladia matetika no nivoatra avy amin'ny plastika fotsiny ka hatramin'ny karazana fitaovana fitambarana, toa an'io solon-karbaona mitambatra io izay somary maivana sy somary henjana? noho ny mpamokatra kiraro vita amin'ny plastika mahazatra dia milaza fa ny tokana henjana dia mahomby kokoa rehefa mandeha môtely ianao, azo antoka fa mahatsapa izany, saingy betsaka ny olona mandà an'io ka tsara ny manasongadina fa izao ny vidiny dia karazany daholo ihany koa. ny rafitra fanidiana dia misy Velcro, fa mahazo dials sy laces koa ianao - zavatra iray hafa hamafisina fa ny kiraro antonony dia miharihary avo lenta kokoa ary fantatrao fa ny kalitaon'ny fitaovana ampiasaina dia fanatsarana lehibe kokoa amin'ny kiraro fidirana maro.
Ity dia zavatra iray izay tsikaritra ihany koa amin'ny karazana tohotra manaraka izay mbola kiraro pointe. Kiraro pointe toy itony, fantatrao fa miresaka an-jatony sy dimam-polo kilao sy miakatra izy ireo ary mety ho lafo tokoa, saingy ireo no tsara indrindra amin'ny mpitaingina mpomba an'i Tour de France rehefa manafika ny tendrombohitra izy ireo. manana kalitao avo indrindra amin'ny fananganana ihany koa amin'ny resaka fitaovana ampiasaina ary ny faladia matetika vita amin'ny fibre karbaona henjana misy ankehitriny. Ny faladia tena henjana dia tsy misy ifandraisany amiko manokana, raha milaza ny marina aho fa tsy ilay sprinter matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao, fa ampahafantarina ahy olona matanjaka faingam-pandeha fa manana tongotra tokana tsy hiondrika rehefa tena mamaky rindrina dia zavatra iray tena ilain'izy ireo, saingy ny zavatra iray izay mankahala ahy dia ny lanjany ary fantatrareo fa tiako ny manana fanampiana betsaka araka izay azoko atao ary arakaraka ny lafo ny kiraro, araka ny nolazaiko, maivana kokoa hatrany izy ireo mahazo lehibe tahaka ity maivana atypical ity fa tsy fahatsapana midika hoe mitandrina zavatra hafa koa no safidin'ny fitaovana ambony.
Ankehitriny dia bandy nentim-paharazana tsotra aho ary milalao karazana fotsifotsy izay mora esorina tokoa satria midika izany fa azonao atao ny mitazona azy io madio raha misy loto miparitaka eo aminy, izay azo antoka fa hitranga amiko na dia ianao aza mitaingina toerana maina rehefa mandeha eny ivelan'ny arabe ianao? betsaka ary hoy aho hoe mahazo kiraro mainty satria kiraro fotsy eny an-dalana dia toa tsara mandritra ny dimy minitra ary avy eo rakotra fotaka izy ireo dia mankanesa any amin'ny fivarotana bisikileta eo an-toerana ianao ary manandrama sasany satria toy ny kiraro mahazatra, ianao fantaro fa te-hanandrana azy ireo ianao satria samy hafa ny fomba fiasan'ny kirarony ary ny marika samy hafa dia mifanentana amin'ny olona samy hafa tsara kokoa na ratsy kokoa, izany dia iray amin'izany. Noho io dia hitanao ireo matihanina marobe izay tsy mifamatotra amin'ny mpanohana kiraro ekipa satria izy ireo te-hisafidy izay tena mifanaraka amin'izy ireo satria tena manokana izany, ka afaka manolotra izany aho ary koa raha mankany amin'ny fivarotanao ianao ary manandrana be dia be ary mahita mpivady tianao ianao dia avy amin'ny fivarotana anao no manohana ny fivarotana bisikilety eo an-toerana tsy misy fitiavana andramo azy ireo ao amin'ny magazay dia aza mividy azy ireo an-tserasera cool Manantena aho fa hitanao fa mahasoa sy mampahalala ity lahatsoratra ity ary raha manana izany ianao azafady mba omeo ankihibe izy ity ary zarao amin'ireo namanao satria manampy amin'ny fanohanana ny fantsona sy inona izany. ataontsika ary raha manana fanontaniana ianao Raha mbola tsy voavaly izahay tao amin'ny lahatsoratra dia ampahafantaro anay ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra ary hanao izay azonay atao izahay hanampiana olona betsaka araka izay azo atao mba hamaly na dia liana amin'ny karazana rafitra pedal aza ianao, izany hoe ny pedal amin'ny lalana sy ny eny -pedal ivelany, avy eo manana lahatsoratra izay mamaritra ny antsipiriany rehetra momba ny fahasamihafana misy eo amin'ireo izay hampifandraisinay amin'ny efijery ankehitriny
Moa ve mifanaraka amin'ny habe ny kiraro bisikileta Lake?
karbonina modely farany avo lenta isaky ny 44.5 ary avereno indraymarina amin'ny habenyimo, mitafy 10,5 US aho.7 2018.
Iza no manao kiraro bisikileta Lake?
Lake Cycling International B.V.
Manana fahasamihafana ve ny kiraro bisikileta henjana?
EINDHOVEN, Netherlands (BRAIN) 9 feb 14:13 MT Ireo tompon-tany Holandey an'nyLake Cyclingefa nivarotra nykiraromarika mankanyLake CyclingInternational B.V., orinasa vao niforona monina any Netherlands ihany koa.
Ny bisikileta henjana dia mahomby kokoa, sa tsy izany? Ny tiako holazaina dia hoe, ny frame miolakolaka mangalatra herintsika Ny bisikileta henjana dia hamindra angovo bebe kokoa ao anaty drivetrain. Fanambarana izay eken'ny maro amintsika amin'ny tena zava-misy.
Ary misy antony marim-pototra, satria ny bisikileta matihanina dia mila bisikileta henjana kokoa ary haingana dia haingana. Ireo mpanamboatra bisikileta dia mivarotra bisikileta mafy aminay satria angatahinay amin'ny ankapobeny izany ary angamba satria ireo mpandinika bisikileta dia midera bisikileta henjana hatramin'ny fotony. Misionera kely isika izao. (mozika bluesy) Na iza na iza manam-pahaizana momba ny fizika dia mahalala fa ny lalàna voalohany momba ny thermodinamika dia milaza fa tsy azo foronina na potehina ny angovo, azo afindra amin'ny endrika iray mankany amin'ny iray hafa ihany izy io, ny tontolon'ny fehezan-dalàna dia afaka mahavita kely amin'ny Let vaky ny lohanao.
Azo avadika hafanana ny angovo, saingy tsy azoko an-tsaina ny mpitaingina azy na ny kalitaon'i Tony Martin aza mamorona zavatra ilaina amin'ny alàlan'ny fanamainana. Mety ho hafa ny tabataba, fa na dia maro aza ny faritra amin'ny bisikiletanao mitabataba, ny frame dia tsy dia maty mandra-pahafatiny ihany. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tena mampiova angovo lavitra ny fiaran-dalamby ilay vatan-kazo, avy eo aiza? Azo atao ve izany? Angamba hiverina vetivety izy io. (Mozika Reggae) Tonga ao amin'ny The Bicycle Academy izahay izao, sekoly iray mametaka sary ao Frome, eo amoron-dàlana avy eo amin'ny GCNHQ, satria i Tom Sturdy, izay injeniera niahy ny fizotry ny famolavolana ny bisikileta GCN namboarina tanana, izy no lohan'ny fiofanana eto ary efa nieritreritra an'ity olana ity izy amin'ny fihenan'ny frame efa ela.
Ary eo fotsiny izy. Ankehitriny izaho sy i Tom dia nivoaka niady hevitra momba io olana io taorian'ny krisimasy ary nilaza ianao fa manana fomba mora be ianao hanehoana ny fomba hamerenan'ny endriny malefaka io angovo io ao anaty powertrain. Ka azonao atao ve ny milaza aminay izay hataonay anio? - Okay, manana izany ve isika? zana-kazo eto izay malefaka ihany ary apetrakay ao anaty fiaran-dalamby turbo izay tsy maintsy hametahana ny bisikileta amin'ny toerana iray .- Tsara.- Azonay ilay izy mba hahafahan'ny kodiarana any aoriana ary izay hataontsika dia isika hiondrika ny frame.
Mampiasà angovo kely hiondrika hanefy ilay frame mba hahafahantsika miato azy io ary miresaka momba ireo teboka samihafa ary hahita izay mitranga rehefa amoahanay azy. - Milamina, tsara avy eo. Lasa izao. (mozika bluesy) - Ka izay ananantsika dia ity sakana mafy orina eto ity izay tsy mandeha mankaiza - zara raha afaka mamindra azy aho - Ary ny pedal ihany no hataontsika ka milimetatra vitsivitsy, iray santimetatra ambonin'ity sakana ity no mipetraka , ok. - Eny e - Amin'izao fotoana izao dia hiala eo isika, mitaingina bisikileta ary tazomy ny frein aoriana mba tsy hahafahan'ny kodiarana ary hampiditra ny pedal izay hampihetsiketsika ny fefy fa tsy hihodina ny kodiarana aoriana. - Okay.
Noho ny fiatoana. - Eny, tokony hitsambikina ve aho? - Ka ny pedal izao dia miala sasatra manoloana ity sakana mafy ity. Ka tsy nihetsika ny kodiarana any aoriana - Tsy niodina ny kodiarana any aoriana satria tapaka ny lamosinao - Ka ny zorony --- Ka inona no nitranga dia nametraka angovo tao anaty fefy izay nanenjana azy ianao ary nampidina ny pedal hikasika ity sakana - Angovo be dia be koa - Angovo be dia be - Be ny hery mandalo ao - Eny. (mihomehy) - Eny ary, ary namela ny lozam-pifamoivoizana fotsiny aho - Marina izany, ka avelao fotsiny ny lamosina aoriana - Eny, vonona ve ianao amin'izany? 3,2,1 Whoa! - Ary noho izany dia hitantsika fa ny kodiarana any aoriana dia misy spina hamoaka ny herinaratra.- Eny, tsy ny fihodinana fotsiny, fa fihodinana lehibe tokoa, sa tsy izany? - Raha tianao ny handehanantsika any amin'ny solaitrabe ary hanao sary vitsivitsy hahalalantsika hoe inona marina no mitranga. - Te hanana hetsika fotsy sy fotsy aho.
Marina, andao hanao izany. (mozika R&J malefaka) Ka somary sahirana aho maka ny lohako, okay. Ka hitako fa velona tampoka ny kodiarana any aoriana, saingy tsy hitako hoe nanao ahoana marina ny fandraisana anjaran'ilay olona tamin'ny flex, andao jerena izay mitranga.
Ity misy fantsona seza, hita avy any aoriana, izay mifandray amin'ny akorandriaka ambany. Ka handeha amin'ny pedal izay eto isika. Inona no hitranga raha? Ity fantsona ity dia eo am-pelatanana satria miondrika manodidina ny afovoan'ny fantsona.
safidy ara-pahasalamana ho an'ny gilasy
Zava-dehibe ny manamarika fa ny haavon'ny bracket ambany dia miova amin'ny sisin'ny bisikileta. Ary ny tena zava-dehibe amin'izany dia ny fahasamihafana eo amin'ny elanelana misy eo amin'ny fononteny ambany - okay- okay, ary ny dikan'izany dia ny manana ny fononteny ambany any sy ny pedalanao izay mivoaka eto amin'ny toerana iray. Rehefa mijoro amin'ny pedal ianao dia midina ny gorodona, midina ny bracket araka ny hitantsika, ary ny pedal dia midina araka ny fahitanay hipetraka eo amin'ity sakana ity.
Avy eo, rehefa mamoaka ny angovo ianao ary mamela ny endriny hihemotra, ny fononteny ambany dia miverina miverina amin'ny toerana nanombohany, nanandratra ny tenany; ny pedal dia tsy mihetsika satria eo amin'ny sisiny izy io, ary ny azonao dia ny fihodinan'ny famantaranandro iray amin'ny rojo vy izay mamadika ny rojo ary mamadika ny kodiarana aoriana - Raha ny teôria dia miverina ao anaty fiara ny angovo avy amin'ny frame anao malefaka ary Ary tsy mieritreritra koa ianao raha mitranga eny an-dàlana izany ary heveriko fa lehibe izany raha izany, dia hitranga izany rehefa manomboka mihena ianao. Izany dia hametraka hery kely kokoa amin'ny alàlan'ny pedal, ka izany dia ho tombony amin'izao fotoana izao rehefa manodin-dàlana izay mety ho mora ampiana fandraisana anjara fanampiny. - Eny tokoa.
Ity sary ity dia tsy ho toy izay mitranga eny an-dàlana satria efa nanitatra ny sasany isika, fa eto kosa ny fotokevitra hitranga rehefa manomboka mametraka hery kely kokoa amin'ny pedal ianao dia hiondrika mankany aoriana ny frame ary amin'ity fotoana ity ianao mahazo ny fihodinan'ny famantaranandro mahasoa amin'ny cranks izay mety hisy fiatraikany amin'ny tsapan'ny mpamily. - Eny, amin'ny maha-fanandramana empira antsika dia tsy milaza ny hamerenany izany, fa ho an'ny tanjona ara-panoharana dia mampiseho fa misy zavatra miseho heveriko rehefa manenjana fefy ianao ary mamerina azy. Mikasika ireo lavaka mety hiseho amin'ilay sary dia tiako holazaina, aiza no itehirizana an'io angovo io raha tsy avy amin'ny fehin-tsoroka? Ny tiako holazaina dia ny zava-misy, mety hisy ve ny fihenan-tsofina ao amin'ilay foibe, sa hanampy izany amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny lalana misy anao araka ny eritreritrao? - Heveriko fa ho lasa singa iray amin'izany rehetra izany; tsy misy fomba hanokanana tanteraka ny rafitra.
Ny faritra tsirairay amin'ilay rojo dia hihodina ary hiondrika kely. Ka sarotra ny milaza marina hoe inona no mety ho vokany eo an-dàlana - Eny ary, ao an-tsaina izany, nitondra bisikileta henjana indrindra aho, dia ny Orbea Orca Aero ahy. Mahagaga haingana.
Azontsika apetaka amin'ny mpanazatra ve izany ka ho hitantsika izay mitranga? - Eny tokoa. - Eny ary, andao jerena izay mitranga. Eny ary, feno entana aho.
Tsara izany, vonona ve ianao? 3,2,1.- Ka mieritreritra aho fa ny zava-mitranga eto dia fanoharana tsara satria io dia rafitra henjana toy izany 'Ianao' raha ny marina dia mila mametraka angovo be dia be isika amin'ny famolahana ilay rindrambaiko ka eo am-baravarana ny pedal. Noho izany dia misy angovo be dia be voatahiry ao satria tsy maintsy mampiasa vola be ianao amin'ny famolavolana ny frame tena mafy - noho izany amin'ny teôria dia tsy misy fahasamihafana eo amin'ny zava-bitanao eny an-dalana amin'ny hamafin'ny fefy raha mbola dia voafetra ao anatin'ny fetra sasany, satria raha misy fefy mafy dia tsy hihoatra izany ary ny herinao rehetra dia hitodika any amin'ny drivetrain, fa raha miondrika kely izy dia averiny dia omenao bebe kokoa - eny, mety, ary any no hanome faritra volondavenona lehibe izay misy ny tena tombony.
Heveriko fa ny lakileny angamba dia tsy maninona izany satria ny olona nieritreritra momba azy taloha dia manantena fa hiteraka adihevitra be ao amin'ny faritra fanehoan-kevitra izany, ka alaivo antoka fa mandray anjara ianao, marina ve ny fanandramana nataon'i Tom? Mety ho avy amin'ny zavatra hafa ve io fivezivezin'ny kodiarana aoriana io, ary inona no lazainao? Tadidinao fa mandeha haingana kokoa ny fitsipiky ny frame manontolo? F na izaho, manontany tena fotsiny raha ho toy ny fanerena kodiarana vaovao ny fahaiza-mioritra. Ka andao hiverina 10 taona ary fantatsika rehetra sa tsy izany? Fantatray fotsiny fa nihodina haingana ny kodiarana mafy kokoa ary afaka nahatsapa izany koa izahay. Fantatsika izao fa ny tsindry ambany kokoa dia afaka mihodina haingana satria na dia mety hahazo fatiantoka hysteresis bebe kokoa aza ianao, dia mahazo fatiantoka mihantona kely kokoa.
Ary noho izany dia mahomby kokoa. Angamba ny bika mihodina dia mitovy. Ny frame henjana dia mahatsapa haingana kokoa raha tsy, raha ny marina, tsia.
Midira amin'ny fizarana fanehoan-kevitra. Ary raha te hahita lahatsoratra hafa momba ny kodiarana sy ny fatiantoka hysteresis ary ny fahaverezan'ny fampiatoana ianao, ny marina momba ny kodiarana midadasika kokoa sy ny peratra midadasika kokoa, dia tsindrio fotsiny etsy? sombiny lalina tsara.
Nike ve manao kiraro bisikileta?
Kiraro bisikiletatsy zava-baovao ho an'nyNike, manana ny marikananaodaka ho an'ireo tia an'i Mark Cavendish sy i Laura Kenny taloha. Na izany aza, ny vaovaoNikeSuperRep Cycle no marika voalohany alohan'ny hidirana anaty tranobisikiletakiraro, ary nohajaina tamin'ny filàna ny fihazonana mafy ny tongotra hikarakarana ny ezaka amin'ny lasely.5 2020.
Aiza no misy ny kiraro Lake?
Ny MXZ303 (booty amin'ny ririnina) dia noforonina noho ny toetrandro mangatsiaka be namelyLake'sfoibe isan-taona, ny moron'nyFARIHYMichigan, izay mety ny maripana no mangatsiaka indrindra any Amerika Avaratra. Volavola maro hafa no namboarinaKiraron'ny farihyfanangonana nandritra ny taona maro.
Inona no atao hoe bisikileta rano?
Ny bisikileta dia fiaramanidina toy ny bisikileta. Ny foto-kevitra dia fantatra tamin'ny taona 1870 tamin'ny anaram-boninahitra 'ranovelocipede 'ary ny anarana dia nampiasaina tamin'ny faran'ny taona 1890. Angovo dia angonina avy amin'ilay mpitaingina amin'ny alàlan'ny crank misy pedal, toy ny amin'ny bisikileta ary atolotra nyranona ny rivotra amin'ny alàlan'ny propeller.
Mendrika ve ny kiraro bisikileta?
Fa nanombokakiraro bisikiletahidin-trano (na, aobisikiletamiteny, 'clip in'), tsy mihodinkodina izy ireo, midika izany fa mijanona ho mirindra ianao ary afaka misoroka ny kitrokely, lohalika ary valahana, hoy i Buschert. Tombony iray hafa amin'ny fametahana azy io ny fihazonana ny tongotrao hilamina kokoa, hoy i Buschert.
Tokony hividy kiraro bisikileta vaventy kokoa aho?
Rehefa manapa-kevitra hoe inonakiraro bisikileta habehahazoana, mandeha amin'ny mahazatra anaohaben'ny kiraro, toy ny bisikiletaShoesmihazakazaka marina amin'nySize. Na izany aza, raha eo anelanelan'ny mahazatra ianaohabe, ohatra, indraindray ianao mandeha miaraka amin'ny 9 ary indraindray 9.5, dia atolotra anao izanyhabe.
Manao bisikileta ve i Nike?
Misafidy ny karazana metyakanjo bisikileta
Nikemanolotra isan-karazanyakanjo bisikiletaho an'ny matihaninampitaingina bisikiletyary amateurs, avy anyakanjo lavaSYbisikiletapalitao, tokilaoty, bibs, fonon-tànana ary satroka.
Karazan-kiraro inona no kiraro bisikileta Lake?
Ny farany an'ny CX 332 dia fibre karbaona feno 100% raha ny ambony kosa dia hoditra Kangaroo manana rivotra malefaka. Ny rafitra fanidiana vaovao dia ny sisin'ny L6 BOA. Ireo kiraro roa ireo, araka ny hevitro, no kiraro famokarana tsara indrindra eny an-tsena. Ny antony iray dia ny fahalavorariany PERFECT, ny iray hafa dia ny fanolorany ny karbaona feno malalaka indrindra eto amin'ny orinasa.
Iza no kiraro bisikileta tsara indrindra ho an'ny lehilahy?
Rehefa avy nandalo maodely tsy tambo isaina, ny safidinay voalohany dia ny Lake CX237 Cycling Shoe Men's White / Black. Safidy mety indrindra amin'ny cyclo-cross izy ireo nefa koa bisikilety an-dàlana, satria manana endrika maivana nefa henjana izy ireo, noho ny faladian-kibon'ny karbaona, rafitra fanidiana boay mora raikitra, ary koa ireo mpanangona hoditra feno voa.
Karazan-kiraro manao ahoana no anaovan'ny Farihy cx332?
Ampy ho an'ny hazakaza-tsoavaly fa mahazo aina tsara mandritra ny andro, ny Lake CX332 dia misy amina volavolan-dalàna sy loko miloko manokana, midika izany fa kely dia kely ny tsy maniry momba ireo kiraro mavesatra sy maivana ireo. Lake CX332 Road Carbon BOA Lake CX332 Road Wide Fit